Real Madrid vs Barcelona: Wakhtiga la ciyaarayo Kulanka El Clasico Oo La Shaaciyey Iyo Markii Ugu Horreysay Oo Duhur Ay Kulmayaan | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Real Madrid vs Barcelona: Wakhtiga la ciyaarayo Kulanka El Clasico Oo La Shaaciyey Iyo Markii Ugu Horreysay Oo Duhur Ay Kulmayaan
Published on September 11, 2017 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(11-9-2017) Madaxa xidhiidhka LaLiga, Javier Tebas ayaa shaaciyey taariikhda iyo wakhtiga ay dhacayso ciyaarta ugu horreysa ee El Clasico ee labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona, taas oo dhici doonta saacad ka duwan xilligii loo bartay.
Cayaarta koowaad ee labada kooxood ayaa ka dhici doonta garoonka Santiago Bernabeu 23-ka December oo ku beegan maalin Sabti ah, hase yeeshee wakhtiga ay dhacayso oo ah 3-da galabnimo ee wakhtiga Bariga Afrika ayaa noqotay mid ka yaabisay dadka hammuunta u qaba daawashada labadan kooxood.
Javier Tebas oo u warramayay idaacadda Onda Cero, ayaa sheegay in ciyaartani ay dhici doonto wakhti ku beegan 1-da duhurnimo ee saacadda waddanka Spain, hase yeeshee, horyaalka Ingiriiska oo maalintaas la ciyaari doono ayaan la ogeyn inay telefishannadu u tebin doonaa, halkaas oo sannadkii tegay aan laga daawanin markii ay isku beegmeen ciyaaraha horyaalka Premier League.
Kulankaan ayaa dhici doonta marka ay kooxda Real Madrid kasoo laabato ciyaaraha naadiyada dunida oo sannadkan lagu qabanayo Imaaraadka Carabta, kaas oo socon doona 6-16 December.
Kulanka 17aad ee horyaalka oo kooxaha LaLiga ay ciyaari doonaan 20-ka iyo 21ka ayay Real Madrid iyo Barcelona wakhti caadi ah oo ku beegan Sabti 23-ka December ay jilbaha is dari doonaan.